दैलेखको भैरवीमा एम्वुलेन्समा राजनीति : प्रतिपक्ष सहमतिमा नजुट्दा एम्वुलेन्स थन्कियो : उपाध्यक्ष बिष्ट (अडियो ) – Online Jagaran
दैलेखको भैरवीमा एम्वुलेन्समा राजनीति : प्रतिपक्ष सहमतिमा नजुट्दा एम्वुलेन्स थन्कियो : उपाध्यक्ष बिष्ट (अडियो )
६ पुष २०७६, आईतवार ०७:४४ December 23, 2019 जागरण
दैलेख ६ ,पुस (जागरण )। राज्य व्यवस्था फेरिएसँगै आफ्ना गाउँ –ठाउँमा परिवर्तन आउने आश जोकोही नागरिकले पनि गर्नु स्वभाविक नै हो । त्यसमाथि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नाराले नागरिकमा झनै उत्साह थपिदिएको छ । तीनओटै तह निर्वाचनपछि गाउँलेले जनप्रतिनिधि पाए । प्रशासनिक तहमा कर्मचारीहरू पनि आए । चुनावताका जनप्रतिनिधिले गाउँमा सडक, खानेपानी,स्वास्थ्य सेवाको राम्रो पहुँच,लगाएत अन्य आधारभूत सेवा सुविधा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि गरेकै थिए । र,सोहि अनुसार जनप्रतिनिधिहरु पनि अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो । जनप्रतिनिधिले नागरिकको आवाश्यक्ता र अबस्थालाई मध्यनजर गरेर हरेक कुराको समाधान गर्न तर्फ ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ नै । तर, दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा नागरिकको सेवा सुविधाको लागि सञ्चालनमा ल्याईएको एक एम्वुलेन्सको चालक राख्न लागि विवाद भएको छ । रु. ११ लाख मुल्यमा खरिद गरेको एम्वुलेन्सको चालक राख्नका लागि विवाद हुनु र नागरिकले एम्वुलेन्स सेवाबाट वञ्चित हुनु भनेको दुर्भाग्य हो ।
गाउँकार्यपालिकामा अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष गरि चार जना नेकपाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ ,’भने् नेपाली काँग्रेसको दुईजना मनोनित सदस्य सहित नौ जना निर्वाचित पदाधिकारी सहितको कार्यापालिका छ । चालक राख्ने निर्णयको कुरामा एउटा पक्षले (अथवा नेका) तर्फका पदाधिकारीले नमान्दा खेरि निर्णय हुन सकिरहेको अबस्था छैन् । जसका कारण विगत ८ महिना एता एम्वुलेन्स थन्किएको हो । गाउँकार्यपालिको महिनामा कहिले एउटा त कहिले दुईवटा वैठक बस्ने गर्दछन् । वैठकमा सँधै एजेण्डा भने सबै भन्दा पहिला एम्वुलेन्सकै हुने गरेपनि हाल सम्म विवाद सुल्झिएको छैन् । जबरजस्ती चालक राख्दा कार्यपालिकानै अबरुद्ध हुन्छकी भन्ने डरले अध्यक्षले ,उपाध्यक्षले सहमति जुट्ने आश गरिरहे ,‘ तर,हाल सम्म अर्काे पक्ष सहमतिमा जट्ने अबस्था आएन् । एम्वुलेन्स थन्किँदा एकातिर जनताले सेवा लिन पाएका छैनन् भने अर्कातिर एम्वुलेन्समा खियालागेर विग्रीन थालेको छ । एम्वुलेन्समा यस्तो विवाद किन ? अर्का पक्षको माग चाँहि के ? के एम्वुलेन्सको चालक राख्नमा विवाद गर्नु र जनताले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनु राम्रो होत ? किन विवाद समाधान हुन सकेन ? भनेर भैरवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमकुमारी बिष्ट सँग पंखबहादुर शाहीले कुराकानी गर्नुभएको छ । सुन्नुहाेस अडियो ‍‍‍…..
Tagged दैलेखको भैरवीमा एम्वुलेन्समा राजनीति :
कर्णाली रैबार २०७६/०९/०६ (विहान)
कर्णाली रैबार २०७६/०९/६ (साँझ)
१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १४:१७ June 1, 2018 जागरण
बाबियाचौरमा फ्रि वाईफाई सेवा सुरु
१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १३:५९ June 1, 2018 जागरण
घर घरमा धारा आएपछि आँसीधारा गाउँवासी हर्षित
१३ श्रावण २०७८, बुधबार १३:०५ July 28, 2021 जागरण